गफ ! .....: 'बाबुरामजी'का कुरा गर्दा
Posted by दीपक जडित at 4:15 AM
त्यति धेरै समय दिएको छैन तर मलाई पनि बाबुरामजीको अड्डा (वेब-साइट) अलि बिझाउनेनै लागेको छ। कट्टरपन्थी साम्यवादको निरस सौन्दर्यशास्त्रको कब्जामा परेजस्तो छ अड्डाको डिजाइन। नेपाली झण्डा नराखेको प्रसंगमा तपाईँको बोलीमा लोली मिलाउन चाहन्छु। कम्युनिष्टहरु देश र राष्ट्रियताको अन्त्य गर्न चाहन्छन्, उनीहरुको भनाइ अनुसार मानव समाज साम्यवादमा पुगिसकेपछि देश भन्ने कुराको अस्तित्व हुन्न रे! त्यहि चिन्तनको प्रभाव हुनसक्छ। देशको झण्डा नराखेको चाहिं मलाई पनि चित्त बुझेको छैन।
माओवादीका अरु नेताहरुभन्दा फरक, मितव्ययी र प्रतिबद्ध देखिन्छन् बाबुराम; यो सही हो। उनीजस्ता मान्छे अलि धेरै हुने हो भने माओवादीको रुपान्तरण अलि सहज र छिटो हुन्थ्यो होला। उनी भविष्यमा कसरी पेश होलान्, माओवादीलाई उग्रपन्थी जनगणतन्त्रको भासमा जानबाट रोक्ने पहल गर्लान् वा आफैं पनि त्यतै बहकिएलान्, त्यसैले इतिहासमा उनको स्थान तोक्नेछ।
'कमरेड' को सट्टा 'जी'लेखेकैले तपाईँको प्रतिकृया मेटिएको हो र यस्तो काइते कुरामा बाबुरामको पनि समर्थन हो भने तपाईँ हामीले केहि आशा नगरे हुन्छ। माओवादीभित्र आउटडेटेड सूत्रहरुमात्रै घोकेका र अत्यन्त साँगुरो वैचारिक दायरा भएका लिंडेहरुको वहुमत छ। सबै हिसाबले कट्टरपन्थी लाग्छ यो दल मलाई। तावा (एमाले-कांग्रेसको अकर्मण्यता) बाट उछिट्टिएको माछा (नेपाली जनता) विकल्प खोज्दा-खोज्दै भुङ्रो (माओवादी)मा गएर जाकिएको अवश्था हो अहिलेको। ब्यक्तिगत हिसाबमा मलाई माओवादीको विल्कूलै बिश्वाश लाग्दैन।
"Neta" sabda sangai allergic bhako belama "Baburam bhattarai" chhin ali ramrai maacnhe holan jasto lagchha malai ajhai pani.
tara unle pani desh ko lagi kehi garna sakeko jasto chhin lagdaina ahile samma....
दीपक् जी । म पनि भट्टराईजीको साइटमा दुई चोटी पसेको थिए । तपाइले भने झै झटट हेर्दा उहि पुरानो याद नै आउने । जहिलेसुकै क्रान्तिमा नै लागिरहने जस्तो । साच्चै किन बिर्सिएका होलान देशका महान ब्यक्तिले पनि आफ्नो राष्ट्रीय झण्डालाई पनि आफ्नो डायरिमा राख्न...
दीपक् जी धेरै राम्रो कुराहरु लेख्नु भएको रहेछ । हतारको कारण सारांशमा मात्रै पढे फेरि समय मिलाएर बिस्तृतमा पढनेछु ।धन्यबाद
यौटा राजा फ्याँकपछि फेरी अर्कोलाई त्यस्तै राजसी सम्मान गर्नु पर्ने हो भने यो गणतन्त्र हुँदै होईन ।
तपाईले ठीकै गर्नु भएछ, हामि जानताका छोराले अर्को जनताको छोरालाई 'जी' भन्दा बढि सम्मान दिएर झुक्न कुनै जरुरी छैन ।
तपाइको टिप्पणी राख्‍ने नराख्‍ने उनको अधीकार हो तर यहि 'जी' को कारणले टिप्पणी मेटिन्छ भने म पनि यस्ता आडम्बरी नेताबाट केहि आश गर्न सक्दिन ।
म त चिया पिउदै तपाईंको लेख हे र्दै थिए बाबुराम जि को ब्लग र बहाको बारेमा लेख्नु भएको ,
पढ्दा पढ्दै चिया पिउन पनि भुलेछु ! लेख पनि एकै सास मा सिद्दिए जस्तो भो , चिया पनि चिसै भो ।
तपाईंको लेख सँग पूर्ण स ह म त छ मेरो , एउटै कुरा मात्रै त्यो कमेन्ट हटाउने चाँही उनै बाबु राम हुन कि उन्का पि ए ( पर्सानल सेक्रेटरी ) अब त्यो चाँही थाहा भएन । अत्यन्तै ब्यस्त मान्छे हरुलाई पि ए ले पनि सघौन सक्छ जस्तो लागेर मैले यो सो चे कि हुँ । तर पनि ब्लग भने पछी पिए ले हेर्नु नपर्ने हो स्ब्यम ब्लगर ब्यक्तिले नै हेर्नु पर्ने हो भन्ने मेरो मान्यता छ ।
नेपाली झन्डा को बारेमा जे लेख्नु भो आफ्नो भाबना , हे प्रभु ! सबै नेपालीको ( खास गरी नेताहरुको पनि किनकी उनिहरु ले नै जनता को मन हाकेका हुन्छन ) मनमा तपाईंले सोच्नु भए जस्ताइ सोच भाईदिए हुन्थियो ।
( म फेरी फुर्सद मा दोहोर्याएर पढ्ने छु तपाईंको यो गहन लेख )
धन्यवाद सबैलाई प्रतिक्रियाको निम्ती त्यसो त मैले मेरो प्रतिक्रिया मेटाई एकै रिसले यो सब लेखे जस्तो पनि देखिन्छ तर मैले यहाँ उठाउन खोजेको मूलकुरा ब्याक्तिगत रुपमा नेताहरुमा हुनुपर्ने संस्कारको हो । लुनाजी उनको ब्लग सञ्चालन गर्ने कोही सहयोगी नै छ भनेपनि उ त निमित्त मात्र हो नि । हामीले गुनासो त बाबुरामजीलाई नै गर्ने हो । उनि ठुला नेता हुन् , देशका मंत्री हुन् तर त्याँहा एक ब्लगर हुन् नि भन्ने हिसाब हो मेरो पनि ।
दिपक जि ! मैले होइन भनेकी छु त !
लुनाजी , लौ तपाईंले होइन भनिदिनुभयो त मैले नि भनेको होइन है । सहमती हो तपाईंसँग मेरो ।